အိုင်တီနဲ့ ကော်ဖီ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » အိုင်တီနဲ့ ကော်ဖီ	36
Posted by manawphyulay on Jun 28, 2012 in Photography | 36 comments
lynn lynn says: မမနောရေ ခံစားပြီး ဖတ်သွားပါတယ်။
mamanoyar says: မနောရေ ဖတ်သွားပါတယ်
Azzurri says: ဒတ်မကျပါနဲ့ဗျာ
manawphyulay says: ဟွန်း… ဒုမှ ကြာနေပြီ ကြာနေပြီနော်… လို့ မပြောတော့ပါဘူး။ ညန်ညန်ရေး ပို့….ဦး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1808
Khaing Khaing says: အလဲ့ မနောရေ ဒီဇိုင်းလေးကတော့ မိုက်တယ်ရှင့် ………… တစ်ကယ်ဖြစ်ချင်တစ်ကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ် ရမည် ……..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 105
Thit Sar Lin says: မမ မနောရေ….အားပေးပါတယ် ဆက်ကြိုးစားပါ…
snow white says: မမမနောကော်ဖီကြိုက်မှန်းသိပါတယ် အားပေးသွားတယ်နော်။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: မမ မနောရေ ဘာညာဘာညာ ကွိကွကွိကွ
char too lan says: :D :D :D :D :D :D :D :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2165
TNA says: ချာတူးရေ များများမပြောနဲ့မောမယ်ဟ။
TNA says: မနောရေ အိုင်တီလေးကိုလဲခံစား၊ ကဗျာလေးကိုလဲခံစား၊ ကော်ဖီလေးကိုလဲခံစားသွားပါကြောင်း။
သားဦး၊မြေးဦး says: အင်တာနက် ကဖေးက ကော်ဖီပူလေးတခွက်သောက်သွားပါ၏
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ကော်…ကော်ဖီလဲ ပေါတေးဒယ်..
ဘေး..ဘေးက လျှောက်တီးအခြမ်းဂျီးနဲ့ ပါရား..ဂျ..
ဖိုးထောင် says: ဟယ် ကောင်မရေ အခုမှပြောတယ်ကြည့်စမ်း မနောဖြူက ပြွတ်သိပ်နေတယ်တဲ့တော့ သွားကြည့်ရအောင်း)
အလင်းဆက် says: မနော..ရေ…စာသားရော…..ဖန်တီးထားတဲ့ ပုံ့ရိပ်လေးကိုပါ…အားကျစွာ.ငေးမော…
ကျွန်တော်..လေးစားစွာ…. ခံစားသွားပါတယ်..ဗျာ ။
thar ag says: ဘာမှန်တော့မသိပါဘူးကျွန်တော်လဲကွန်ပြူတာေ၇ှ့မှာထိုင်ပြီဆို၇င်တော့ တော်တော်နဲ့မထတောဘူး
ညလေး says: ခံစားချက်ချင်းတိုက်ဆိုင်တယ်မမမနောရယ်…..
ကြောင်ဝတုတ် says: ကျွန်တော်ကြားဖူးတာက အိုင်တီနဲ့ ၀ီစကီဆိုလား… အိုင်တီနဲ့ ဘရမ်ဒီဆိုလားပဲဗျ…
Azzurri says: ဘယ်ကသာ …
အိုင်တီ နဲ့ မာဆက် ဗျ…
အိုင်တီ နဲ့ မျက်မှန် သာ အတွဲအညီဆုံး …
pan pan says: အင်း
အိုင်တီနဲ့ ဂျယ်လီ ကိုက်နေတယ် :D
ကိုဂီတို့အတွက်တော့ အိုင်တီနဲ့ ဆေးလိပ်လို့ ထပ်ပေါင်းပေးမယ်နော ဘီယာတို့ အရက်တို့ကတော့ ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ရင်း သောက်လို့မှမရတာ :D
manawphyulay says: ဟုတ်ဘူး မနောက ကော်ဖီကြိုက်တော့ ကော်ဖီဆို ကော်ဖီပဲ လဲဘူး…. :P
မျက်မှန်ကလည်း တပ်ထားရတော့ မပါမဖြစ်ပေါ့ ဟဲဟဲ
King of Secrets (Bo Min) says: မိုက်တယ်ကွာ၊ Rapping သီချင်း ရေး လို.ရပြီ။ :D
Ma Ei says: မနောလေးရေ…
si tone says: ဆ၇ာမ ၇ဲ့ စားသာလေး က heart ထိတယ် ဆ၇ာမ မနော
maung khinmin says: အိုင်တီကိုလည်း …. ပူပူလေးကြိုက်တယ်
ကောက်ဖီလည်း … ပူပူလေးကြိုက်တယ်
ကဗျာတွေကျတော့ … နွေးနွေးလေးကြိုက်ပြန်သပ
we R one says: ကော်ဖီသောက်ရင်း အိုင်တီ ကဗျာ ကို အပြည့်အ၀ ခံစားသွားပါဂျောင်း…
mon nyein says: ချယ် သမီးရဲ့hate ကိုထိသွားပြီး
Inz@ghi says: ဟမ် ….
Moe Z says: သများဟာသများ ဘယ်ထိထိပေါ့လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 481
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: မနောရေ…
mon nyein says: inz@ghi
Inz@ghi says: ရေးထားတာ မြင့်တော့ မြန်မာလိုတောင် မနည်း နားလည်အောင် ဖတ်ရတယ်ဗျာ.. အဲ့လို စာတွေ ရေးပြီး .. ဆုံးမပါဦး လမ်းပြပါဦးဗျ…
YE YINT HLAING says: သူများ အမှား ကို ထောက်ပြပြီး မဟား ရဘူး ညီလေး ရဲ့ ! ဆုံးမ တာနော် ! မကြိုက်ရင် ပြောဝူး ! ( ဆွပြီး လစ်ပြီ )
Mလုလင် says: ခင်ဗျား ဗျာ … ရွာထဲက သတ်ပုံ အသင်း လာရင် ပြောတော့မှာ ပဲ …. စာလုံးပေါင်းတွေ မှားလိုက်တာ … QUOTE ထားတဲ့ စာသားတွေကို ပြောတာ နော့ … ကျုပ်တော့ ခင်ဗျားကို အထင်မကြီး တော့ဘူးဗျို့  ….
Mလုလင် says: တိန်!!!!!!! .. အင်ဇာဂီ ရေးတယ် ထင်လို့ အပိုင် ပဲ ဆိုပြီး လာမန့်တာ … သေချာဖတ်ကြည့်ပြီး မှ .. တွေ့တော့တယ် .. သက်ဆိုင်သူ ရေ … sorry ပါဗျာ …။ :-(
Was this answer helpful?LikeDislike 3194
manawphyulay says: ဟောတော့ ဘယ်မှာဘာတွေလာဖစ်ကုန်ကြပါလိမ့်နော်… သူများကော်ဖီတောင် သောက်ရင်း အရသာပေါ့သွားပြီ သူတို့လုပ်တာနဲ့… ဟွန့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply
Comments By PostPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - uncle gyi - အရီးခင်လတ်ကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - လုံမလေးမွန်မွန် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - awra-choမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - uncle gyi - TNAရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - garuda - garudaမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - TNA - ခင် ခသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - လုံမလေးမွန်မွန် - Mr. MarGaနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - လုံမလေးမွန်မွန် - အလင်း ဆက်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - လုံမလေးမွန်မွန် - Mobile13သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်bin bo..........(ဘင်ဘို) - မိုး မင်းသား - TNAရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - GaviaGirl - Ma Eiအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - padauk moe - မောင် ပေတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - မောင် ပေ - ရွှေတိုက်စိုးအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - Mr. MarGa - အရီးခင်လတ်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - Mr. MarGa - Mr. MarGaအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Mr. MarGaရထား ထွက်တော့ မယ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအဟံ ပထမံ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Phoe Thitsarလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - အရီးခင်လတ် - မွေ့ကေသာအိပ်မက်မင်းသမီး - Phoe Thitsar - KZဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ကြောင်ဝတုတ်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities